Nsogbu ehighị ụra nke ọma na nsogbu ụra na-abawanye okpukpu abụọ - Ibi ndụ ahụike 2022
Nsogbu ehighị ụra nke ọma na nsogbu ụra na-abawanye okpukpu abụọ
Ndị ikom na-akọ nsogbu ihi ụra, dị ka ehighị ụra nke ọma na ịmụrụ anya n'abalị, nwere ihe ruru okpukpu abụọ nke ọrịa cancer prostate nke ndị ikom na-enweghị ihe isi ike dị otú ahụ, nchọpụta ọhụrụ na-atụ aro.
Ndị nchọpụta nke Dr. Lara G. Sigurdardóttir nke Mahadum Iceland dị na Reykjavik duziri nyochara otú nsogbu ihi ụra nwere ike isi tinye n'ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate, dabere na nyocha ndị gara aga jikọtara ọrịa ahụ na ọrụ mgbanwe abalị na ụra ụra.
N'ime afọ ise, otu Dr. Sigurdardóttir hụrụ ụmụ nwoke 2,102 Icelandic ndị dị afọ 67 ruo 96, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ọrịa cancer prostate mgbe ha malitere isonye na ọmụmụ ihe ahụ.
Ndị ọrụ afọ ofufo ahụ zara ajụjụ anọ mgbe ha debanyere aha ha: olee ọgwụ (ọ bụrụ na ọ dị) ha ṅụụrụ ụra, ma ehighị ụra nke ọma mere ka ha mụrụ anya, ma hà tetara n'ụra abalị dum ma nwee nsogbu ihi ụra ọzọ, na ma hà na-eteta n'isi ụtụtụ na nwere nsogbu ịra azụ azụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 9 nke ụmụ nwoke kwuru na nsogbu ihi ụra "siri ike", na pasent 6 ọzọ kwuru na nsogbu ihi ụra "dị njọ" dị ka usoro ọkọlọtọ si dị.
Ndị nyocha ahụ chịkọtara data gbasara nchọpụta ọrịa kansa prostate nke ndị sonyere na ya. N'ime afọ ise ọmụmụ, pasent 6.4 nke ụmụ nwoke nwere ọrịa kansa prostate.
Nnyocha data gosiri na ka nsogbu ụra na-akawanye njọ, ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate dị elu. Ụmụ nwoke ndị kọrọ na ihe isi ike siri ike karị ịdaba na ịrahụ ụra nwere oke ihe ize ndụ na-arị elu, site na 1.6 ruo 2.1 ugboro ihe ize ndụ nke ndị ikom na-akọ na ọ dịghị nsogbu ụra.
N'igosi njikọ ahụ n'ihu, ndị ikom nwere nsogbu ihi ụra "dị oke njọ" nwere ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate dị elu okpukpu atọ.
Ndị nchọpụta ahụ kwadoro nchoputa a site na nyochaghachi data ahụ mgbe e wepụrụ ndị ikom ndị na-akọ na nsogbu ụra na-eteta ugboro ugboro n'abalị, bụ ihe mgbaàmà nkịtị nke ọrịa cancer prostate. Nke ahụ wepụrụ atụmanya nke nsogbu ihi ụra dị otú ahụ nke sitere na ọrịa kansa prostate a na-achọpụtaghị.
"Ọrịa prostate bụ otu n'ime nsogbu ahụike ọha na eze maka ụmụ nwoke na nsogbu ihi ụra bụ ihe a na-ahụkarị," Dr. Sigurdardóttir kwuru na mwepụta akụkọ.
Amabeghị ihe na-ebute njikọ dị n'etiti nsogbu ihi ụra na ihe ize ndụ kansa prostate. Nnyocha ndị ọzọ dị mkpa iji nyochaa njikọ ahụ.
"Ọ bụrụ na a kwadoro nsonaazụ anyị site na nyocha ndị ọzọ, ụra nwere ike ịghọ ihe mgbaru ọsọ maka ntinye aka iji belata ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate."
Ọmụmụ ihe ahụ kwughachiri mkpa ọ dị usoro ihi ụra dị mma maka ahụike ogologo oge. Nnyocha ndị gara aga achọpụtala njikọ yiri nke ahụ n'etiti nsogbu ihi ụra na ụmụ nwanyị na ihe ize ndụ dị elu maka ọrịa cancer ara, yana nke dị n'etiti ụra ụra na mbelata ọmụmụ nwoke.
E bipụtara nchoputa ọmụmụ na akwụkwọ akụkọ Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
Ọnwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa: Washington na-akọ Ọnwụ nke atọ mgbe ọ natachara dose Pfizer nke abụọ
Otu nwanyị dị afọ 17 nwụrụ n'ihi njide obi izu izu ka ọ nwetasịrị ọgwụ Pfizer nke abụọ, na-aka akara nke atọ nke onye si Washington na-anwụ mgbe ọ gbasịrị ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19
Pfizer Vs. Moderna: Ntụle nke Mmetụta Mgbapụta Na-enwekarị
Mmetụta ndị a na-ahụkarị nke Pfizer na Moderna boosters fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, dabere na ule ụlọ ọgwụ